बिरालाे (लघुकथा) - Lekhapadhi साहित्य/कला : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २३ आश्विन २०७८, शनिबार १४:१८ मा प्रकाशित
यथार्थ लासकाे छेउमा पुग्याे । आमालाई छाेपेकाे सेताे कपडा उठाएर हेर्याे । वरिपरि रहेका सबैलाई दुखेसाे पाेख्याे । आफ्नै मुहार छाेपेर रून लाग्याे ।
–“आमा ! म टुहुराे भएँ !”
छेउमा अर्काे भाइ आश्चर्य थियाे । उसले पनि आमाकाे लासमा रहेकाे रामनामी पल्टायाे । लासलाई निकै भावुक भएर हेर्याे । निशब्द रहेका आफन्त चुपचाप थिए । आश्चर्यले सुँक्क सुक्क गरिरह्याे । उसले पनि आमासँग पुकारा गर्याे ।
"असल छाेराहरू जन्माउने तब न आमा !" भावुक भएका छाेराहरूले निकैबेर छाति पिटेर राेए, आफन्त जनले सम्झाए । लामाे समयपछि माैनता छायाे ।
–“आमा ! म अभागीलाई एक्लै छाेड्याै ! अब कसरी बाँचुँ !”
मृतक आमाप्रति उनीहरूले भावुकता बस देखाएकाे सम्मानले वरपर उभिएका सबैका आँखा रसाए । छाेराहरूकाे कर्तव्यकाे प्रशंसा पनि सायद सबैले मन मनै गुने हाेलान् ।
–“असल छाेराहरू जन्माउने तब न आमा !”
भावुक भएका छाेराहरूले निकैबेर छाति पिटेर राेए, आफन्तजनले सम्झाए । लामाे समयपछि माैनता छायाे । सन्नाटाकाे बिचमा आफन्तजनले भने ।
–“यस्तै हाे, अब लास उठाओैँ !”
मृतक आमाकाे लास उठाउने बेला थियाे। तिनका श्रीमतीमध्ये एकले रामनामी र अर्काेले ईशुनामी आँचललाई लासकाे माथि राखिदिए । आफन्तहरूमा उग्र सन्नाटा छायाे । उसै अन्धकार बनेकाे आफन्नहरूकाे मन झन् ऐठन बन्याे । चुपचाप हेरिरहे ।
–“दाइ अब आमालाई जलाउन घाट लैजाउँ !”
भाइकाे कुरा सुनेर दाइ चाहिँलाई निकै रिस उठ्याे । भाइकाे वचन भूईं खस्न नपाउँदै रिसकाे जम्काताेडले भन्याे ।
–“जिउनी तँ मात्रै खाने ? चिहानमा गाड्न लैजाउँ !”
उनीहरूकाे बिचमा बिस्तारै भनाभन सुरू भयाे । आफन्तहरू हेरेकाे हेर्यै थिए । श्रध्दान्जली चलिरहेकाे थियाे । आफन्तकाे भिड बढेकाे थियाे । दाजुभाइ तीब्र असन्ताेषले मनमनै पाकेर दायाँ वायाँ फर्केका थिए । यत्तिकैमा एउटा विरालाे मन्त्र जप्दै आयाे । लासमा झण्डा ओडाएर भन्याे ।
–“हार्दिक श्रध्दान्जली !”
झिंगा भन्किरहेकाे थियाे । फूल, माला र अबिर थुप्रँदै थियाे । धूपकाे सुगन्ध उडिरहेकाे थियाे । आफन्तहरू विस्तारै परपर सरिरहेका थिए । उनीहरूले सम्झे ।
–“अझै अपसगुन !”
हावा, हुरी, वतास र बबण्डरकाे बिच सबै ज्यान बचाउन फेरि लाखा-पाखा लागे । तर पनि हावा, हुरी र बबण्डरका बिचमा आमाकाे मन संस्कारका लागि निडर भएर बसेकाे थियाे ।